Hetsika ara-tsosialy ny 8 mars 2014
Fanoloram-boky tao Valpinson – Toamasina
Tonga nanatitra fanomezana tao amin’ny centre communautaire ao vakiparitra 11/62 Valpinson ny solombavambahoaka voafidy teto toamasina sy ny mpiara-miasa akaiky aminy.
Nifanandrify tamin’ny fankalazana ny 8 mars 2014 mantsy ny fanolorana azy ity. Raha miresaka hoe fitaizany dia ny reny avy hatrany no resaha na ny vehivavy araka nambaran’i Ramatoa NDAHIMANANJARY Johanita.
Ny tanjona dia fampitomboana ny fahalalanan’ ny tanora sy ny ankizy manodidina iny faritra valpinson iny. Raha ny fiaraha-miasa kosa indray dia efa nisy izany talohan’ny fampielezankevitra ka izao fanolorana boky isan-karazany izao.
Tonga nandray izany ny filohan’ny fonkotany sy ny mpiara-miasa aminy.
(22) Prud′homme RAKOTOSON : 11-03-2014 - 15:00